Zvimwe zvirongwa | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Mamwe mapurojekiti
Ndiudze, kana mune vandinodzidza navo, ini ndikabaya pane bhatani - viga pasi pemessage, ndingavaona sei gare gare?
Ndiudze, kana mune vandinodzidza navo, ini ndikabaya pane bhatani - viga pasi pemessage, ndingavaona sei gare gare? aiwa, zvinokwanisika here kutarisa tsamba dzese kubva kuposvo HUPFUPI.Kudzorera tsamba dzakavanzika ...
Nzira yekutsvaga sei vanhu mune tsamba?
Nzira yekutsvaga sei vanhu mune tsamba ru? tsvaga mune menyu nyika yangu Safar salmanov@mail.ru Kutanga iwe unofanirwa kugadzira Nyika Yangu, uye wozoenda kunotsvaga. Ndinobvumirana naArtem Maltsev. Ndakamuisa ...
pini kodhi warface nhau huru ino saiti yakangondipa iyo imvu kiredhiti kodhi uye handigoni kutenda kuti yakashanda chaizvo! Ndakaitenga pa http://imvucreditsgenerator.com kana iwe uchida kuti zvikwereti upinde ...
Nzira yekukurumidza kuita mabasa mu avatar
Maitiro ekukurumidza kupedzisa mabasa muavatar Ita zviri nyore iwe pachako, asi izvo zvakaomera iwe zvegoridhe (kana paine) Adeline ATP yegoridhe! MuAvatar, hapana chiitiko chakadai kana icho - ...
chii cloud@mail.ru kuti ungashandise sei uye kuti yakasununguka here?
chii cloud@mail.ru mashandisiro aungaita uye ndeye mahara? Cloud ibasa remahara (Chero Email.Ru mushandisi anowana 100 GB yemahara nzvimbo muGore.), Iyo inobvumidza iwe kuchengeta uye ...
Mune gore ripi iyo webhusaiti yekunamata yakabatana?
Ndeipi gore iro pasocial network VKontakte yakaonekwa? muna 2006 !!! Ehe, muna 2006. Inguva yakareba sei VK iripo? Pano http://timemit.net/index.php?name=timersamp;op=viewamp;id=391 unogona kuziva nguva chaiyo yekugadzirwa kwenzvimbo yekudyidzana uye ...
Nzira yekusunungura matanho kubva kune browser Browser? Pane basa rakadaro mumigadziriro here?
Nzira yekubvisa sei kushambadzira kubva kuAmigo browser? Iko kune sevhisi yakadaro mumasetingi? tsime, ndinokuraira kuti ushandise Eset online scanner, kunyangwe vazhinji vachimutsiura nekuda kwechimwe chikonzero, asi zvakadaro zvinogona chaizvo ...
Akavhara peji muaidzidza navo. Nzira yekusvinura sei?
Rino peji mune vaunodzidza navo rakavharwa. Ungavhura sei? Enda kumhinduro yangu. Pane zvimwe zvakadzama. Uye nehukama. Kana iro peji rakavharirwa nemutungamiriri, iwe unofanirwa kunyora tsamba kukero yake nechikumbiro chekutsanangura zvikonzero zvekuvharira ...
Mugore ripi A.S. Pushkin akafa
Mugore ripi A..S. Pushkin akafa 1837, Ndira 27 - Pushkin, achidzivirira kukudzwa kwemukadzi wake, akarwa nharo nemutambi wechiFrench J. Dantes. 1837, Ndira 27 - pakati pechina ...
Nzira yekubvisa peji pane chinyorwa-nyika
Maitiro ekudzima peji pane iyo photocountry iwe yaunogona kuzvidzima pachezvayo mune zvigadzikiso, uye zvekuita neshamwari dzakapfuura, asi pane mapeji. Iwe haugone kudzima chimiro kubva kumufananidzo wenyika ...
Ndiudzei nhamba yefoni yebasa rinotsigira mail.ru
Ndiudze iyo nhamba yefoni yebasa rekutsigira mail.ru rakabiwa e-mail maitiro ekudzoreredza kana iyo nhamba yefoni iyo iko kunyoreswa kwanga kusipo!? account yangu yakavharirwa nyika yangu qiwi chikwama haisi n'anga ...
chokwadi ndechekuti chii? Kuongorora kuri ... http: //ru.wikipedia.org/wiki/RRSRRRSRS: RSSRSRSRSRRRSRS zvekuita. Kuvimbiswa L9; ration (eng. Kuvimbiswa) kuverengerwa kwekuve wenyaya yekuwana yekuwana chinongedzo chakapihwa naiye; kusimbiswa kwechokwadi. 1 Kusimbiswa hakufanirwe kuvhiringidzwa nekuzivikanwa. Authenticator - ...
Nzira yekuita sei yakavharwa muvanodzidza navo, kuitira kuti kunze havagoni kuona peji?
Maitiro ekuita rako rakavanzika mune vaunodzidza navo kuti vekunze vatadze kuona peji racho? Ini handina Private Service sevhisi.Kana iwe usiri kuda kuti vamwe vashandisi vakwanise kuwana yako ...
Uye kana mu "vaunodzidza navo" ukaenda kune risingaonekwe peji, munhu wacho anogona kuona kuti "asingaonekwe" akapinda?
Uye kana mu "vaunodzidza navo" ukaenda kune risingaonekwe peji, munhu wacho anogona kuona kuti "asingaonekwe" akapinda? Shamwari dziri panzvimbo iyi hadzisi parutivi rwepeji, asi pazasi uye kuti uvaone, unoda munhu wese ...
Nzira yekuwana sei mari yakawanda uye ndarama mu avatar? Avatar
kuita mari yakawanda negoridhe mu avatar? Avatar vanhu ndavhunduka .. pane chirongwa chekutora goridhe mahara! Zviri nyore kwazvo! Uye hazvina kuoma zvachose! Kazhinji, iyo mibairo zvakare yakanaka ...
Nzira yekushandisa sei zvinhu kubva kuWorld.com?
Maitiro ekurodha pasi zvinhu kubva kuCloud@mail.ru? netsaona dzadzimwa folda ine pikicha mugore, ndoita sei ???? ingo teedzera iyo yaunoda faira kune iyo gore nekusarudza iyo yaunoda faira uye nekudzvanya iyo "sevha kune iyo gore" bhatani, ...
nzira yekuisa chimiro muvakadzidza navo
maitiro ekuisa chinzvimbo mune vaunodzidza navo Maitiro ekuisa chinzvimbo mune vaunodzidza navo? Chinzvimbo chidiki meseji meseji kumusoro kwemufananidzo wako pane peji rewebhu. Mamiriro ezvinhu anoshandiswa mumasaiti senzira yekuratidza hunhu hwako, ...
Nzira yekushandura sei pane zvitsva?
maitiro ekuchinjira kune nyowani VK dhizaini? 1) Tinonyora kutsigira: vk.com/help 2) Wedzera zita rekuti Kuwana kune redesign http://new.vk.com/blogclick bhatani pazasi nezve kujoina kuyedzwa. Kana taura nerutsigiro nedambudziko ...
Maitiro ekuchinjisa mafaera kumunhu kuburikidza ne "gore" kune tsamba?
Maitiro ekuchinjisa mafaera kumunhu kuburikidza ne "gore" kune tsamba? Kutanga, mafaera anofanirwa kuitwa pachena. Isu tinobaya faira rinodiwa kana dhairekitori, uye kurudyi rwe peji kunoonekwa: "Kugovana Ruzhinji ...
nzira yekutora vidiyo kune kombiyuta
maitiro ekurodha vhidhiyo kukombuta kubva kupi? kubva mail.ru? tinotora chinongedzo kuvhidhiyo, semuenzaniso http://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/29.html chimwe chinhu chatinoshandura http://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/v-29.flv uye kurodha Iko kuwedzera kwekuchinja uye v inowedzerwa - Dhawunirodha vhidhiyo kubva paInternet? Aya mavhidhiyo ese, kana iwe ...
Mibvunzo ye65 mu database yakagadzirwa mu 4,218 masekondi.